Bilaogy - Lemur Conservation Network
Raha toa ka manana fotoana ianao ka manodidina an’ Antananarivo, dia tongava mitsidika ny Faritra arovana ao Anjozorobe, izay adiny roa sy sasany monja miala ny renivohitra raha mandeha fiara. Ny ala-javaboahary arovana na alan’Anjozorobe dia fonenan’ny karazam-borona 82 sy karazana varika 11. Mitovitovy amin’ny hita any Andasibe-Mantadia ny karazana varika hita ao, fa ny […]Read More »
Fitsidihan-toerana, fitiavana nitsiry hatramin’ny fahazaza Nandranto fianarana momban’ny “primatologie” izay ianarana manokana momban’ireo primaty toy ny varika i Naina teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, Fakiolten’ny siansa. “Efa fony kely aho no tia zava-boahary ary tao Tsimbazaza no nahitako varika voalohany tamin’izaho 9 taona” hoy i Naina. Nanomboka liana tamin’ireo varika ireo izy nanomboka teo ary te hahafantara […]Read More »
Ny momba ahy ve? Vololonirina Faramalala no anarako ary i Rina no ahalalana ahy. Mpianatra mpikaroka avy ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, ao amin’ny Fakiolten’ny Siansa ; sampam-pampianarana ADD na “Anthropobiologie et Développement Durable” ny tenako. Sampana iray ianarana momba ny olombelona sy ny varika ny ADD, ka tao no nandalinako ny mombamomba ireo karazam-barika misy eto […]Read More »
Eto Madagasikara, ny fizahan-tany maitso na Ecotourisme dia ahazoan’ireto zavatra manaraka ireto tombony : na ny mpizahan-tany izany, na ny mponina eny ifotony, na ny varika sy ireo bibidia hafa. Ny fizahan-tany maitso mantsy dia manampy ny fiarovana ny natiora amin’ny alàlan’ny fanohanana ny asa fiarovana sy ny fanomezana fidiram-bola maharitra ho an’ny mponina eny […]Read More »
Lazalazao aminay fohifohy ny mombamomban’ny tetikasa GERP Manombo? Ny tetikasa GERP Manombo dia nitsangana ny taona 2017. Ao Manombo, Farafangana any amin’ny faritra atsimo atsinanan’ny nosy no ivon-toeran’ny tetikasa. Natsangana izy io ho fanohizana ny fiarovana ireo zavaboahary, indrindra ny Varika manodidina sy ao anatin’ny ny “Réserve Spéciale” Manombo. Tsy mitsaha-mitombo mantsy ireo tsindry mianjady […]Read More »
Mba lazalazao ny mombamomban’ireo fikarohana ataonao ? Ny fikarohana nataoko nahazoana ny mari-pahaizana “doctorat” tany Hamburg, Allemagne dia mahakasika ireo katsetsitra (parasites intestinaux) izay hita any amin’ny karazana varika anisan’ny kely indrindra, mandeha amin’ny alina, antsoina amin’ny teny siantifika hoe “Microcebus murinus” na “Tsitsidy” amin’ny teny Malagasy. Anisan’ny hita tao anatin’izany fikarohana izany fa arakarakin’ny […]Read More »
Rehefa tsy misy vina amintsika intsony ny maha harena ny varika dia indro entina amintsika indray ny resaka momban’ireo asa fivelomana ateraky ny fiarovana ny varika sy ny ala fonenany. Izany no atao hoe “ conservation business” na “business de conservation”! Teny Fampidirana Vao tamin’ny volana jolay 2020 no nanambara ny Vondrona Iraisam-pirenena Miaro ny […]Read More »
Rariny ny filazana fa ny fahi-bibidia dia tsy vitan’ny toerana fialam-boly fotsiny. Na dia antom-pisian’ny fahi-bibidia voalohany aza ny fialana voly, dia tsapa fa manan-danja betsaka amin’ny izy ireny ihany koa ankehitriny ny fanabeazana, ny fikarohana ary ny fiarovana ny bibidia. Raha resaka fiarovana ny bibidia no asian-teny, ny fahi-bibidia dia afaka mitarika asa fiarovana […]Read More »
Mba zarao aminay ny momba anao? Misa no anarako, “SIG et Télédétection” no sampam-pianarana nofidiko tao amin’ny IOGA na Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo, sampana iray ianarana manokana momban’ny “Géosciences” ao amin’ny Oniversite an’Antananarivo. Momban’ny fivoaran’ny fahapotehan’ny ala tao anatin’ny 10 taona tamina faritra arovana iray ny “sujet de memoire” -ko tamin’izany. Tia biby […]Read More »
Covid-19 sy ny fankalazana ny andron’ny varika Tamin’ity taona ity dia nanasarotra ny fankalazana mivantana ny fisian’ny Covid-19. Nanova ny fomba fankalazana ny hetsika ho an’ny mpikambana sasany izany. Raha nisy ireo nisafidy ny hetsika virtoaly, dia nisy ireo nanao hetsika mivantana mba hahafahan’izy ireo manatona olona akaiky kokoa ho fanentanana momba ny fiarovana ny […]Read More »
1. Maherin’ny 100 ny karazana varika fantatra ankehitriny, ary amin’ny endriny sy habe maro samihafa! Misy karazany 111 ny varika, izay hita amin’ny endrika sy habe rehetra. Ny kely indrindra, ilay antsoina hoe Tsidin’i Madama Berthe, dia milanja manodidina ny 30g eo ho eo, ary ny lehibe indrindra, izay ny Babakoto, dia milanja 6 hatramin’ny […]Read More »
Inona izany Club Vintsy izany ? Ny Club Vintsy dia fikambanana mpiaro ny tontolo iainana mitsangana eny anivon’ny sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ary amin’ny ambaratonga rehetra amin’ny fianarana. Ny taona 1992 no niorina ny Club Vintsy voalohany. Miisa 750 izy ireo manerana an’i Madagasikara. Anisan’ny vokatry ny tetikasa “Ny Voaary” izay nokarakarain’ny WWF […]Read More »
Mahafaly anay eto amin’ny Lemur Conservation Network no mampahafantatra ny Ny Gasy Forestry Students’ Association – Madagascar (GFSA – Madagascar) , izay fikambanana voalohany indrindra mampivondrona ireo mpianatra eo anivon’ny Departemantan’ny Ala sy ny Tontolo Iainana ao amin’ny Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA-Forêts), Oniversiten’Antananarivo. Isaorana betsaka ny ekipa izay tarihin’i R. Ntsiva N. Andriatsitohaina […]Read More »
Ny momba momba an’i Princiah Rabary Andriamihaja Princiah no anarako. 24 taona aho izao ary mpianatra taona faha 5 eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, fakiolten’ny siansa ary mianatra manokana momban’ny varika sy ny fiarovana azy ireo. Eo andalam-pamaranana ny fianarako aho ankehitriny, ary vao avy nahavita ny fidinana roa volana tany amin’ny valanjavaboary tsy miankina ao Berenty, […]Read More »
Ny momba momba anao i Franklin? Franklin no anarako, 32 taona ny tenako ary guide Naturaliste ny asa hataoko. Fito taona izay no nisehatra tao anatin’ny mpiseradia aho ary dia nifantoka bebe kokoa tany amin’ireo toerana ahitana vala-javaboary tsy dia be mpitsidika ary tsy dia be mpahalala loatra. Maro tokoa ny fahaizana sy fahalalana notovoiziko […]Read More »